Warshad Wiremesh & Dayrarka - Shiinaha Soosaarayaasha & Deymarka Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaasha
Waxaan ku hawlan nahay inaan macaamiisha u siino Electro GI Wire tayo sare leh. Waxaan haynaa warshad galvanized silig ah oo joogto ah kaas oo fuliya geedi socod dhammaystiran oo isku xigxiga oo hubiya sheyga ugu tayada fiican. Diritaanka khadka tooska ah ee siliggu wuxuu bixiyaa jilicsanaan badan. Qeybta dahaadhka, hadda waxaa la mariyaa marinka loo yaqaan 'aqueous solution' oo ay ku jiraan walxaha zinc taasoo keeneysa daaha zinc ee siligga si isku mid ah. Ka dib markii la xoqay, siligga waxaa loo maraa xalka ka hortagga miridhku waxaana lagu qaadayaa saxan kulul si looga saaro qoyaanka siligga oo loo rogo qaadashada. Kormeer muuqaal ah oo ah qaboojinta iyo daahan ayaa loo sameeyay si loo hubiyo wax soo saar tayo wanaagsan leh. Iyada oo loo baahan yahay silig gi ah oo loogu talagalay mesh digaagga, mesh mesh, tayada dib u soo celinta, Wareejinta Wareejinta Wareegga ayaa la heli karaa. Ka baaraandegay kaarboon yar, kaarboon dhexdhexaad ah iyo wax bir bir ah oo kaarboon sare leh.
Hot Dip GI Wire waa habka ku lug leh gudbinta siligga iyada oo loo marayo qubeyska zinc la shubay oo leh heerkulka taangiga ee 850 F taasoo keentay dahaadhka zinc ee dusha siligga. Dahaadhkan zinc wuxuu bixiyaa caabbinta daxalka siligga wuxuuna kordhiyaa cimri dhererka sheyga. Silig galvanized sidoo kale loo yaqaan GI Wire, Galvanized Binding Wire, GI Wire, Galvanized Wire, Hot-Dip galvanized Wire, fiilooyin galvanized, fiilooyin dahaarka leh, Redrawing galvanized silig, silig galvanized, silig galvanized, silig galvanized, silig galvanized, Wareegyada Wareega Wareega, Fiilooyinka Gawaarida Gawaarida ah, Fiilooyinka Kulul ee Zinc Kulul.